Semalt: Atụmatụ Spammers Jiri Mee Ihe Ọganihu?
Michael Brown, Ụlọ elu , na-ekwu na ọ dịghị mkpa ka ị kpachara anya, spam ga-enweta ozi ịntanetị spam na igbe mbata gị. Ihe siri ike ịghọta bụ otú ndị spammers si achịkwa iji nweta adreesị email ahụ niile. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịme ihe ụfọdụ, ị ga-enwe obere ihe ị nwere ike ime. Na ogologo oge, spammers na-achọta ụzọ iji nweta adreesị ozi-e gị. Ndị ọrụ anaghị aghọta ihe kpatara arụmọrụ a - right networks vs cloud9 analytics.
Voxbox World Telecom Inc. nke Canada abụghị ndị ụlọ ọrụ bara uru. Otú ọ dị, ndị spammers anaghị eche banyere nke ahụ. Onye spammer na-akpọ onwe ya Francis jikọtara ụlọ ọrụ a na ozi ozi. Francis nanị zụrụ ala n'aka Voxbox wee kpebie iziga ozi gbasara ozi iji chọta onye nwere anyaukwu na-akwụ ụgwọ ya na uru.
"Ụgha na mgbapụta" dị otú ahụ na-eme atụmatụ ịghọ ezigbo ewu ewu. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị nwere nzacha spam, ndị spammers na-achọta ụzọ iji zere ha iji hụ na e nyefere ozi ịntanetị ha na onye natara. Ha na-ahọrọ iji usoro ahụ a kpọtụrụ aha n'elu ebe ọ na-enye ha ohere ịga nke ọma n'enweghị njikọ na ebe nrụọrụ weebụ ha na-aga spam. Ihe ha choro bụ ozi na-etinye ngwaahịa.
Nchọpụta nke Jonathan Zittrain, prọfesọ University nke Oxford na Laura Frieder, bụ prọfesọ prọfesọ University nke Purdue, gosipụtara na ihe mere ndị spammers ji eme nke ọma bụ na atụmatụ ndị a na-arụ ọrụ! Ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-aga dịka atụmatụ ahụ si dị, ha na-eme ihe dịka pasent 5 mgbe ndị na-azụ ahịa ha na-efu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 7 nke ego ha.
Ozi ọma ahụ bụ na ị nwere ike iji ụzọ dị mfe ma dị irè iji kpochapụ spammers. Nke mbụ, ị ga-ehichapụ spam ahụ. N'agbanyegh i ot 'u odi mma na ihe na-ad i mma, nye ya nsogbu ma ghara az u ihe nd i ah u. N'ihi na ihe ka ọtụtụ n'ime ndị mmadụ na-azụ ya nanị n'ihi na ha aghọtaghị na ọ bụ spam. Na-echeta mgbe niile na ịnwa ịme ngwa ngwa nwere ike igwu egwu gị.